कुटनीति - Pahilo News
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसमक्ष बुझाइएको चार बुँदे ‘ननपेपर’का आधारमा उक्त संशोधन गरिएको थियो । त्यही संशोधनपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता गरेको थियो । भारतको सल्लाहमा उसैलाई खुसी पार्न ल्याइएको उक्त संशोधनमा समेत सहमत नभएर मधेसी दलहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।
‘सुनुवाइ रोक्ने कानुनै छैन, सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गरियोस्’
हामीलाई छनौट भई रहेको देशमा राजदुत कार्यरत रहेको भन्ने पनि फिर्ता गर्ने निर्णयमा..
आज भारतको ७० औं स्वतन्त्रता दिवस, ओलीद्वारा हार्दिक शुभकामना
'१५ अगस्त सन् १९४७ मा भारतले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता विश्वभरिका मुक्तिकामी जन..
स्रोतले भन्यो, 'यसअघि संकटपूर्ण अवस्थाा पनि सम्बन्धित देशका उच्च अधिकारीहरुसँग र..
भारतीय राजदूतद्वारा दाहाललाई बधाई
विहान सात बजे आफ्नो दूताबास उपनियोग प्रमुख विनय कुमार र राजनीतिक शाखा प्रमुख एस ..
भारतसँग नझुकेर प्रधानमन्त्री भएका ओली नझुकेरै विदा भए
केपी ओली सरकारमा जाँदा जे मुद्दा उठाएर गएका थिए, ती मुद्दा नबिसाएरै फर्किएका छन् ।
‘अल्पमतमा परेका ओलीलाई सत्तामै राख्न चीनले चलखेल गरिरहेको छ’
‘ओली सरकारले राष्ट्रवाद र देशभक्तिको खेती गर्न खोजेको छ तर राष्ट्रवाद भनेको पहाडी मानिसको मात्र होइन । यदि दुई तिहाई मात्र होइन, तीन चौथाई मधेसीको माग पूरा नगर्नुमा चिनियाँ हस्तक्षेपले काम गरेको छ ।’
हल्का टिप्पणी, भारत–निर्भरता र अबको बाटो
प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रशासनिक तहबाट झण्डै १७ वर्षदेखि स्थापित सम्वन्धलाई राजनीतिक तहबाट ‘ब्रेक थ्रु’ गरेकै हो । दुई–दुई पटक नेपाल भ्रमण, त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले त्यही कुराका आधारमा अहिले पनि कुनै बैठक काठमाडौंमा त कुनै बैठक दिल्लीमा दिनहुँजसो भइरहेका छन् ।
बुँदा नम्बर ५ मा रहेको नेपालले हातहतियार किन्दा भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ असमान छ । त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा नेपाल सरकार पुगेको छ । स्रोतका अनुसार, भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई सम्मिलित नेपाली टोलीलाई त्यही लाइनमा गृहकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
खनाल चीन भ्रमणमा, बेइजिङमा उपचार र भेटघाट
एमाले केन्द्रीय कार्यलय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने भ्रमणबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘ए हो र ! जानुभएछ ? पार्टीलाई त कुनै जानकारी नै छैन’, श्रेष्ठले भने ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षको अध्ययन र पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिन गठित दुवै मुलुकका विज्ञ सम्मिलित प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक राजधानीमा सुरु भएको छ ।
माधव नेपाल र भियतनामी कम्युनिस्ट नेताबीच भेट
हनोईस्थित भियतनामी कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको उक्त भेटघाटमा दुई देश तथा दुई कम्युनिस्ट पार्टीको आपसी सम्बन्ध, सहयोग र सरोकारका बारेमा कुराकानी भएको थियो । उपाध्यक्ष तांगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गर्नुभएको थियो ।
बैंककमा नेपालको आफ्नै दूतावास भवन
१५ असार । सरकारले थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा रु ४५ करोडमा चार रोपनी जग्गा र त्यसले चर्चेको भवन खरिद गरेको छ । उक्त जग्गा र त्यसमा रहेको भवन आजैदेखि नेपाली दूतावासको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको उक्त दूतावासले जनाएको छ । स्थापनाकालदेखि भाडामा रहेको उक्त दूतावास अब आफ्नै भवनमा रहने र त्यसबाट मुलुकको आर्थिक भार घट्नेछ । [&hell..
२७ जेठ । दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी मुख्य उप–सहायक विदेशमन्त्री विलियम टोडले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा बिहीबार भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा नेपाल र अमेरिकाबीचको द्धिपक्षीय सम्बन्ध, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संविधान निर्माण र कार्यान्वयन, नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी स..
नेपालमा ८२ वर्षको कुटनीतिक अभ्यासमा २ सय २३ पटक राजदूत नियुक्ति भएको छ । त्यसमा १ सय ३१ पटक राजनीतिक क्षेत्र र ९२ पटक कुटनीतिक सेवाका छन् । एकजनाले चार पटक, तीन जनाले तीनपटक र २७ जनाले दुई पटक राजदूत हुने मौका पाएकाले अहिलेसम्म राजदूत हुनेको संख्या चाहिँ १ सय ८७ मात्र छ ।
२५ जेठ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलसँग गणतन्त्र चीनका ‘जोइन्ट स्टाफ डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रल, मिलिटरी कमिसनका डेपुटी चिफ एडमिरल सुन जिङ्गोको नेतृत्वले शिष्टाचार भेट गरेको छ । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री रावलले नेपाल सदैव एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको र चीनको प्रगतिमा नेपाल खुसी हुँदै आएको कुरा उल्लेख गरेका थिए । उनले गत वर्ष ने..
कुटनीतिक सेवामा रहेर लामो समय व्यतीत गरेकाहरुले आफ्ना अनुभवहरु बाँड्ने चलन सबैतिर छ । तर, नेपालमा चाहिँ किन हो, अवकाश पाइसकेपछि पनि मुलुकका लागि उपयोगी हुने र आम मानिसलाई पनि रुचिकर हुने ती विषयमा कमै पुस्तक लेखिन्छन् । मोहनकृष्ण श्रेष्ठले त्यसमा थोरै भए पनि आफ्नो तर्फबाट योगदान गरेका छन्, कुटनीतिमा तीन दशक पुस्तकबाट । आत्मकथा [..
रिपब्लिकनको विदेश नीति सार्वजनिक
काठमाडौं, १६ बैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति पदका लागि रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवारको दौडमा रहेका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो नीति पेश गरेका छन् । पाँच राज्यको प्रारम्भिक चरणमा क्लीन स्वीप पछि ट्रम्पले ‘सबै भन्दा पहिला अमेरिकाको नीतिलाई प्राथमिकता’ दिने बताए का छन् । उनले राष्ट्रपति बाराक ओबामाको विदेश नीति लक्ष्यहीन भएको आरोप लगाएका छन् ..
काठमाडौं, १६ बैशाख । सरकारले बनाउने राजदूत जसलाई बनाए पनि नेपाली सेनालाई कुनै टाउको नदुख्नुपर्ने हो । तर, यसपटक सरकारले गरेको २१ जना राजदूतको सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक दलभित्र जस्तो छताछुल्ल नभए पनि भित्रभित्र सेनासमेत असन्तुष्ट बनेको छ । सेना असन्तुष्ट हुनुको कारण अरू नभएर राप्रपा नेपालको कोटामा युएईको राजदूतमा सिफारिस भएका भरत ..
काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट एउटै साता तीनवटा टोलीले छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमण गर्ने भएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा सचिव प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वको १५ सदस्यीय टोली गत ४ गते चीन प्रस्थान गरेलगत्तै मंगलवारकेन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नेतृत्वको १५ सदस्यीय अर्को टोली १० दिने भ्रमणमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको..
नेत्री कोइराला इण्डोनेशीया प्रस्थान
वैशाख ८, काठमाडौ । नेपाली काँग्रेस नेत्री एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला बुधबार राती इण्डोनेशीया प्रस्थान गर्नुभएको छ । नेपाली समयअनुसार बेलुका सवा एघार बजे त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको हो । आगामी अप्रिल २२ देखि २४ सम्म इण्डोनेशीयाको राजधानी जर्कातामा हुने विश्व सम्मेलनमा भाग लिन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभएको हो । सम्..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको दुई महिना नबित्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणको पहल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार नेपालका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकार हुने संकेत पाएपछि मात्रै औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने गरी भारतले कूटनीतिक सूत्रहरूमार्फत पहल गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आ..
माटोको शहर’ लोमान्थाङ घुम्न जाने पर्यटक घटे
काठमाडौं– कम्युनिष्ट र रातो रङ एक अर्काका पर्यायवाची । झन्डा रातो, अभिवादन रातो (लालसलाम) अनि नाम पनि रातो । रातो अर्थात क्रान्तिको प्रतिक । जनयुद्धकालमा बाबुराम भट्टराईको नाम त लालध्वज नै थियो । लालध्वज क्रान्तिकारी पहिचान दिने नाम थियो । यस्तो रातोलाई आत्मसात गर्दै आएका डा.बाबुराम भट्टराई अहिले रातोबाट टाढा–टाढा देखिँदै छन् । ..
सपथ लिएको भोलिपल्टै मेक्सिकोमा मेयरको हत्या